टिप्स एण्ड ट्रीक्स Archives - Living with ICT
Home / टिप्स एण्ड ट्रीक्स
आफैले आफ्नाे कम्प्युटरलाई स्लो बनाइराख्नुभएको छ कि ? यो समस्या सबैले भोगेकै हो कि कम्प्युटर निकै ढिलो खुल्छ, ढिलो चल्छ, कुनै प्रोग्राम खुल्न निकै समय लाग्छ, आदि । हामी प्रायः सबैको कम्प्युटरमा Core2Duo, i3, i5 प्रोसेसर र १, २ वा ४ जिबीसम्मको र्याम होला । त्यसमाथि हामी आफैले जानीजानी वा अञ्जानमा आफ्नाे कम्प्युटरलाई ढिलो बनाउने काम गरिरहेका हुन्छौं । यसको प्रमुख …
तपाइको मोबाइलमा रहेका विभिन्न एप मध्ये कसलाई के–केमा अनुमति दिने भन्ने कुरा तपाइले छनौट गर्न सक्नुहुन्छ । एन्ड्रोइड मार्सम्यालो अपरेटिङ सिस्टममा आधारित भएर चल्ने मोबाइल प्रयोगकर्तालाई एप्स पर्मिसनका बिषयमा ब्यापक स्वतन्त्रता दिइएको छ । जसले गर्दा प्रयोगकर्ताले आफूले चाहे अनुसार एप्स पर्मिसन नियन्त्रण गर्न सक्छन । १. तपाइको डिभाइसको सेटिङमा जानुहोस । डिभाइस सेटिङ भित्र त्यहाँ भएको एप्स अप्सनमा क्लिक …
आफ्नो फोन अरूसँग सेयर गरेपनि आफ्ना निजी एवम गोप्य सुचनाहरू चुहावट हुन नदिन वा तिनको सुरक्षाका लागि गेष्ट मोडको प्रयोग गर्न सकिन्छ । गेष्ट मोडमा रहँदा तपाइको साथीले तपाइको मोबाइल प्रयोग गरेका बखत तपाइको इमेल, टेक्स्ट आदिलाई ब्ल्क गर्न सकिन्छ । १. क्विक सेटिङ खोल्न तलपट्टि स्वाइप गर्नुहोस । २. दाहिनेपट्टिको माथिल्लो भागमा भएको युजर आइकोनमा ट्याप गरेर एड अ …
अफिसमा हुनुहुन्छ तर तपाईंको घरमा भएको कम्प्युटरमा भएको फाइल चाहिएको छ ? क्लासमा भएका बेला तपाईंको घरको कम्प्युटरमा भएको फाइल आवश्यक परिरहेको छ ? एक ठाउँमा बसेर कुनै अर्को ठाउँमा रहेको कम्प्युटरलाई एक्सिस गर्न असम्भव छ भन्ने सोच राख्नुभएको छ भने तपार्इं गलत हुनुहुन्छ, यसो गर्न असम्भव पक्कैपनि छैन । तपाईंले घरमा बसेर संसारको जुनै कुनामा रहेको कम्प्युटरसँग पनि सजिलै …
डिस्प्ले साइज र क्वालिटी चेक गर्नुहोस् ः आफूलाई उपयुक्त लाग्ने स्किृन साइज रोज्नुहोस् । डिस्प्ले क्वालिटी रेजोल्युशनस“ग निर्भर हुन्छ । जति धेरै रेजोल्युशन हुन्छ, त्यति नै डिस्प्ले क्वालिटी पनि राम्रो हुन्छ । अपरेटिंग सिस्टम ः बजारमा अहिले एन्डोइड, आईओएस र विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम भएका मोबाइल छन् । आफूलाई मन पर्ने अपरेटिङ सिस्टमको नया“ भर्सन किन्नु राम्रो हुन्छ । प्रोसेसर र …
Dec 22, 2016	2
हिजोआज क्यामेरा फोनको अपरिहार्य अंग बन्न पुगीसकेको छ । हरेक फोनमा क्यामारा जडान गरिएको हुन्छ र त्यसले नै कयौ प्रयोगकर्तालाइ आकष्ति गरिरहेको हुन्छ । आजभोली स्मार्टफोनमा भएको क्यामेरा हेरेर फोन खरिद गर्ने नियती नै बनेको छ । यहिलेको युवापुस्ताले फोन कल र म्यासेज पछि अत्याधिक प्रयोग गर्ने फिचर भनेको मोबाइलको क्यामेरा नै हो । चाँडपर्वका बेल परिवार सँग बिभिन्न फोटा …